Maamulka Somaliland oo ku fashilmay wax ka qabashada sicir bararka ka jira doollar Mareykanka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka Somaliland oo ku fashilmay wax ka qabashada sicir bararka ka jira doollar Mareykanka
Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in qiimaha lagu kala sarifto doollarka iyo shillinka Somaliland ay gaartay halkii ugu sareeysay ebid tan iyo markii uu maamulka Somaliland soo saaray go’aamadda lagula dagaalamayo sicir bararka iyo iyo sarif bararka dollarka islamarkaana kor loogu qaadayay qiimaha shillinka Somaliland.
Kor u kaca sarifka ama isu-bedelka lacagta doollarka ee shillinka Somaliland ayaa maalmihii u dambeeysay lagu sarifaayey 1-kii doollar lacag dhan 8,600 Shillinka Somaliland gacanta hore ah, taas oo kasoo horjeeda digreetadii uu dhawaan soo saaray madaxweynaha maamulkaasi Axmed Siilaayo, kaas oo lagu meel mariyay qiimaha in doollarku aanu dhaafi karin 7,000 oo shillinka Somaliland ah.
Sidoo kale, waxaan illaa iyo haatan la garaneyn qiimaha gacanta dambe ee doollarka lagu kala iibsanayo, taas oo iyadu noqotay wax suuq madoow lagu kala iibsado.
Dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda maamaulka Somaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kor u kaca ku yimid qiimaha doollarka oo ay tilmaameen inuu yahay wax sharci darro ah oo aan u hoggaansamin go’aamadii kasoo baxay maamulka Somaliland.
Waxaana meesha ka baxay go’aankii madaxweyne Siilaanyo uu 24-kii bisha kowaad kasoo saaray sicir bararka iyo sarifka qiimaha doollarka iyo kor u qaadista qiimaha shillinka Somaliland, wuxuuna madaxweyne Siilaanyo fulinta go’aankaasi u xilsaaray guddida heer qaran ee la dagaalanka qiimo-dhaca Shilinka Somaliland iyo sicir-bararka oo shaqadoodu aheyd la socodka iyo suulinta sarif bararka baahsan ee bulshada hareeyay.
Qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa isweydiinaya halka ay ku dambeeyeen guddida heer Qaran ee la dagaalanka qiima-dhaca Shilinka Somaliland iyo sicir-bararka, waxayna madaxweyne Siilaanyo ugu baaqeen inuu socod siiyo go’aankii uu kasoo saaray kor u kaca doollarka.
“Waxaan u aragnaa qalad waxaan leenahay madaxweynaha go’aamadiisii la dagaalanka sarifka kor usii kacaya waa in la fuliyaa oo gudidii uu u xil saaray ay shaqeysaa ilayn waa kan dollarkii kor un usii socda” Sidaas waxaa yiri Axmed Naasir oo ka tirsan dhalinayarada ku nool magaalada Hargeysa.
Sidoo kale, C/raxmaan Maxamed Sidci oo isna ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa guddida ugu baaqay inay daacad ka ahaato suulinta sarif bararka, wuxuuna tilmaamay in arrinkaasi ay tahay mid laf-jab ku ah shacabka Somaliland.
“Sicir bararkaan waxaan u aragnaa laf-jab ku yimid bulshada Somaliland, waxaanu ka codsanaynaa xukumadayada inay shaqo deg-deg ah oo ka daacad ah ay ka qabato oo go’aankeedi hore ay ku adkaysato.” Sidaas waxaa isna yiri C/raxmaan Maxamed Sidci.
Mid ka mid ah sariflayaasha lacaga doollarka ee magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo Xuseen Cali Xaaji ayaa sheegay inaan weli la helin ciriqa rasmiga ah ee lagula tacaalayo kor u kaca doollarka iyo qiimeynta shillinka Somaliland isaga oo guddida ku eedeeyay in aanay daacad ka ahayn howsha uu madaxweynuhu u igmaday.
“Waxaan weli la helin ciriqa rasmiga ah ee xalka u noqon kara kor u kacaan lacagta qalaad ee soo noq-noqnaysa, madaxweynuhu in badan ayuu isku dayey balse guddida uu u xilsaaray ayaaney daacad ka ahayn suulinti kor u kaca lacagta qalaad.” Sidaas waxaa yiri Xuseen Cali Xaaji oo ka mid ah sariflayaasha lacagta doollarka ee magaalada Hargeysa.
Dhinaca kale, guddida heer qaran ee la dagaalanka qiimo-dhaca shillinka Somaliland iyo xakameynta sicir-bararka ayaan wax faahfaahin ka bixin sababta uu sarifka qiimaha doollarku ugu noqday halkiisii iyo waxyabaaha ay illaa hadda ka qabteen adeegyadda lacagta hawada la isugu diro ee Mobile Money Transfer.
Sanadkii hore ee 2016-ka, 25-ka bisha kowaad ayay ahayd markii guddoomiyaha bankiga dhexe uu sheegay inaan $100-ka doollar sarifkiisa la dhaafin karin 700,000 oo shillinka Somaliland ah, balse ma muuqdo wax daba-gal ah oo arrintaas lagu sameeyay, waana tan xilligaan gaarsiisay in boqolka doollar lagu sarifo 860,000 oo shillinka Somaliland ah.
Ugu dambeyntii, shirarkii kala duwanaa oo ay guddiga la dagaalanka sicir bararka heer qaran dhawaan la yeesheen shirkadaha ka ganacsada qaadka iyo shirkadaha isgaarsiinta oo lacagaha doollarka mobileda isugu xawila ayaanay noqon kuwo wax ka badala qiimaha kor usii kacaya ee dollarka, iyadoona aanay jirin cid weli arrinkaasi wax muuqda ka qabata.